Nserahwɛfo Nye Nserahwɛ: Jehovah Adasefo Edwumayɛbea A Ɔwɔ South Africa
Aso ɔsɛ dɛ idzi kan kã kyerɛ hɛn ansaana aba nserahwɛ? Nyew. Sɛ nyimpa a wɔreba nserahwɛ no dɔɔ sõ o, wɔnndɔɔ sõ o, yɛserɛ dɛ hom ndzi kan mbɔ hɛn amandzɛɛ ansaana hom aba nserahwɛ. Iyi remma ahokyer mmba ha osian nyimpadɔm a wɔbɛba ebegu ha no ntsi, na woara so w’enyiwa aagye wɔ wo nserahwɛ no mu. Dzi kan bɔ hɛn amandzɛɛ aber a wɔaka dapɛn kor anaa dza ɔbor dɛm ma aaba nserahwɛ no. Sɛ da a edze bɛba nserahwɛ no yɛ dapɔnda a, yɛsrɛ wo kã kyerɛ hɛn ntsɛm koraa ana ber no aasõ.
Nserahwɛ Wɔ Bea A Wɔyɛ Bethel Efie Ndwuma: Sɛ wɔhyɛ nserahwɛ no ase a, wobedzi kan nye wo akɔ Bea A Wɔyɛ Bethel Efie Ndwuma no, na aahwɛ video a odzi kan. Ber a wogu nserahwɛ no do no, ebɔhwɛ video ahorow pii aka ho. Iyi bɛma ehu ndwuma ahorow bi a ɔkɔ do wɔ Bethel naaso afofor nnhu, afei so ibohu mbrɛ Bethel boa ma ɔsom edwuma no kɔ do. Mbofra no botum nye Caleb na Sophia a wɔayɛ hɔn tɔys no etwa mfonyin wɔ bea a wɔfrɛ hɔ Bɛyɛ Jehovah Ne Nyɛnko no.
Nserahwɛ Wɔ Nwoma Tsintsimbea 2: Ebɔhwɛ video ahorow ebiasa. Ɔbɛma ehu mfaso a ɔwɔ do dɛ wɔbɛkyerɛ nwoma ase akɔ hɛn kurow mu kasa mu na woeetsintsim. Ibohu mbrɛ hɛn nwoma tsintsim mfir ebien no nyina si yɛ edwuma. Afei so, ibohu Bible ahorow a wɔada no edzi. Iyi so bɛma ehu mbrɛ nna wɔdze Nyankopɔn ne dzin dzi dwuma wɔ South Africafo hɔn Bible ahorow mu.
Nserahwɛ Wɔ Nwoma Tsintsimbea 3: Ibohu nwoma tsintsimbea hɔ nyina, na aasan so ehu bea a wɔhyehyɛ nwoma ahorow no. Ebɔhwɛ video ahorow ebiasa bi; ɔbɛma ehu mbrɛ wosi sisi Ahendzi Asa ahorow, wɔdze nwoma mona, nye mbrɛ wosi yɛ video ahorow nye dza wɔbɔ tsie.
Ahɔhogyebea: Ibotum ekedzi w’ewiaber edziban a edze bae no wɔ dɛm bea yi. Wɔdze bɔs sisi dɛm bea yi, na odu ndapɔnda so a, wotum dze kaar ahorow nyina bi sisi hɔ.
Kaar Nhyehyɛɛ: Wɔayɛ nhyehyɛɛ dɛ bɔs ahorow mfa ahɔho no mfi ahɔhogyebea kor nkɔ ahɔhogyebea fofor.
Wotsintsim mbuukuu, magazine, nwomaba, nye nkrataaba ahorow wɔ kasa bɔbor 150 mu, na wɔdze mona asafo ahorow ɔpepem a wɔwɔ aman 20 do. Wɔkyerɛ Bible ho nwoma ahorow nye video ase kɔ kasa ahorow bɔbor 20 mu. Wɔnam Regional Design/Construction edwumayɛea no do boa Ahendzi Asa nsii wɔ afrika aman 42 do.
Fa mona Fa mona Edwumayɛbea Ahorow Nye Nserahwɛ: South Africa
Edwumayɛbea Ahorow Nye Nserahwɛ: South Africa